उग्र विरोधले उग्र राष्ट्रवादलाई पश्रय नदेओस् - Hello Patrika
सरकारले बलियो कुटनीतिक पहल गरि समस्याको समाधान गरोस्
उग्र प्रदर्शनको नाममा भारत र नेपालको सम्बन्ध धेरै बिग्रियो भनें त्यसको जिम्बेवारी कसले लिने ? भारत र नेपालको सम्बन्ध धेरै बिग्रियो भनें नेपालले चाहे अनुसार समस्याको समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन ?
उग्र प्रदर्शन को सन्देश सचेत जनताले के बुझ्ने ? सरकार प्रति जनताको भरोसा बढेको हो कि हराउँदै छ !
काठमाडौं । देश जनताको भावनात्मक नाताले शक्तिशालि हुन्छ । देशको अस्मिता माथी आउने खतराको आभाषले जनताहरु आन्दोलित हुन्छन् । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका विषयमा नेपालमा भारत विरोधी प्रदर्दर्शनहरु शुरु भईरहेका छन् । ति प्रदर्शनलाई भावनात्मक आवेगमा आएको विरोध मान्न सकिन्छ । भारतको नयाँ नक्शाको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार बेनामी हस्ताक्षरको विज्ञप्ति जारी गर्दै एकपक्षीय ढंगबाट गरिनै कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने बताएको छ ।
नेपालमा एकातिर अहिले भारतको नयाँ नक्शाको बारेमा विरोध हुँदै आएको छ भनें अर्को तर्फ नेपालको सीमा विभिन्न ठाउँमा चीनले मिचेका समाचार सार्वजनिक भइरहेकै छ । अहिले भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो आधारिकारिक नक्सामा पारेर देखाएपछि विवाद पुनः चर्केको हो । नेपालले त्यसको औपचारिक विरोध गर्नुबाहेक अरू थप केही गर्न सकेको छैन । पछिल्ला समयमा केही क्षेत्रमा चीनले पनि नेपाली भूभाग कब्जा गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारले चीन र भारतसँगको विवाद समाधान गर्नुको सट्टामा औपचारिक विरोध गर्नुबाहेक अरू थप केही गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप राष्ट्रभक्तिको नाममा उग्र प्ररदर्शनहरुले पश्रय पाईरहेको छ । विरोधका नाममा राजनीतिक दल निकटका संघसंस्थाले उग्र प्ररदर्शन बढाउँदै लगेका छन् जुन कालान्तरमा अति उग्र हुँदै जाँदा उग्र राष्ट्रवादको प्रदर्शन भई नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापारिक नाका घोषणा गर्दा पनि नेपालले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो । तर चीनले पनि आफ्नो गल्ति स्विकारेर माफि मागेको देखिन्न । आम नेपालीले भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध भारतीय दूतावास समेत घेराउ गरी सच्याउन माग गरिरहेको अवस्थामा चीनले समेत सन् २०१५ को प्रकरणको जवाफ दिनुपर्ने दवाव बढिरहेको छ ।
हामीलाई जति नै अप्रिय लागे पनि स्वीकार गर्नैपर्छ भारत वा चीनसँग पौँठेजोरी खेलेर नेपालले सीमा फिर्ता लिन सक्तैन । तर अन्तराष्टिय मञ्चमा सरकारले प्रभावकारी आवाज उठाउन नसक्दा र जनतालाई राष्ट्रहितमा आवाज उठाएको विश्वास दिलाउन नसक्दा जनताहरु भारत र चीनको विरोधमा सडकमा आएका छन् । राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दिको समयमा जस्तो प्रष्ट नबोलेकोमा समेत सामाजिक सञ्जालमा मसिना असन्तोषका आवाजहरु आउन थालेको छ । अहिले सरकराले जनतालाई विश्वासमा लिएर भारत र चीनसँग प्रष्ट भाषामा आफ्ना कुरा राख्न सक्नु पर्छ । कुटनीतिक परिपक्वता देखाउनु पर्छ । ता कि भोली भारत र चीनले जनताको विरोधको आधारमा नेपाल सरकारलाई हेर्ने व्यवहार नकारात्मक नबनाउन् ।
नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूभाग स्पष्ट देखिने नक्सा जारी गरोस् र भारत र चीनको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ हेरोस् । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग समेटेको र नेपालका प्रधानमन्त्री चुप लागेर बसेको भन्दै आइतबार जनकपुरधाममा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्रधी नरेन्द्र मोदीको पुत्ला एकैपटक जलाइएको हो । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी) र जनगणतान्त्रिक मोर्चा धनुषाका नेतारकार्यकर्ताले स्थानीय जनक चोकमा ओली र मोदीको पुत्ला जलाएका हुन् ।
नेपाल भारत सिमा विवादले उग्र राजनीतिक रंग लिएमा नेपाल सरकारका लागि पनि त्यो सैहृय नहुने वातावरण आउन सक्छ । यस्तो अवस्था नआओस् भन्नाकै लागि सरकारले कुटनीतिक रुपमा समस्या समाधानमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ता कि छिमेकीसँगको सम्वन्ध फेरी सुधार्न नसक्ने नगरी ड्यामेज नहोस् र नेपालको हितमा सरकारकै भूमिका बलियो दखियोस् । जनताले उग्र पर्दशर्न गर्न पनि नपरोस् ।
देशको मुद्दामा सरकारले काम गर्छ र गरिरहेको छ भन्ने भावना जनताले अनुभुत गरुन् । सरकारप्रति जनताको भरोसा रहिरहोस् । किनभने नेपालमा सरकारलाई गाली गरेर राजनीतिक लाभ लिने गलत अभ्यास छ र यसको फाइदा पनि छिटो हुने त्यस्ता शक्तिहरुले विश्वास गरिरहेका पनि उदाहरण भेटिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले सिमा समस्या समाधान गर्न छिटो भन्दा छिटो सार्थक र प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गरोस् । ता कि उग्र प्रदर्शनको बलमा उग्र राष्टवादले मलजल पाई कुटनीतिक सुझबुझले हुने समाधानको सट्टामा नयाँ-नयाँ विवादहरु देखिने र समस्या जेलिने खतरा बढ्दै नजाओस् । नेपाल विस्तारै संक्रमणकालबाट समृद्धि तर्फ लाग्दै गरेको अवस्थामा यस्ता घटनाहरुले नेपालको उन्नतीको यात्रामा ब्रेक नलागोस् । नेपाल विरोधी शक्तिले चलखेल गर्ने मौका नपाओस्। यस तर्फ सरकार सचेत होओस् । (२४ कार्तिक २०७६)
अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने फैसला, जनकपुरधाममा मिठाई बाँडियो